Wantoota Walittimakuu fi Boca kaasuu
wantoota walitti makuu fi Bocawwan kaasuu wantoota walitti makuu fi Bocawwan kaasuu
wantoonni walmakani kaafaman bifa gurmaa'ina qabu,wantoota dhuunfa garee atti gulaaluuf hingalchine.
wantoota G-2 qofa walitti makuu dandeessa.
Wantoota G-2 lamaa makuuf:
Wantoota G-2 walitti makuuf Wantoota lamaa ykn isaa ol filadhu.
Akka gareewwaniiosoo hin ta'in ,wantoota waliin makame kan fudhatuqabeenya duubaa dura tarreeffama wanta gara gadiiti wantooni walitti maaman adda baasuun ni dandeessa garuu,qabeenyi wantoota jalqaba isaa ni gadhisa.
Wantoota yeroo walin masktu,iddoo wantoonni walirra bu'amanitti boolli'ini mul'ata.
Ibsa keessatti,wantoonnni hin makamne gara bitaa fi wantootanni makamanimmoo gara mirgaatti argamu.
Bocawwan ijaaruu ni dandeessa hojiirra oolchuun waliin - Maki ,Hir'isi fi Walqaxxamursiisi ajaja gara lamaa ykn iusisaa oilitti.
Ajajoonni boca kan hojjetu wantoota G-2irratti qofa
Bocawwan ijaaraman qaeenyaa wantoota tartiiba tarreeffaman gadi filadhaa.
Bocawwan-Fooyyessifi kan armaan gadi keesatti tokko Filadhu:
Jidduutti kutuu .
Ajaajawwan Roga bocaa
Ibsa calaqqee armaan gadii keessatti wantoonni xabbooo gara bitaa yoo ta'an bocawwan fooyya'an mirgaa ta'a.
Bocawwan - Walin makuu
Bal'ina wantoota filatamani tarreeffama duraa duuba wanta miljaatti ida'i.
Bocawwan - Hir'isuu
Bal'ina wantoota filatamani tarreeffama duraa duuba wantichaa hir'isi.
Bocawwan - Gidduutti Kutuu
Wallirra qunnqmuun bal'ina wantoota filatamani boca haaraa uuma.
Bal'inni ala walirra qunameni haqama.
Title is: Wantoota Walittimakuu fi Boca kaasuu